विश्व चर्चित खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको आज जन्मदिन, कति बर्ष लागे उनी ? – " सुलभ खबर "
विश्व चर्चित खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको आज जन्मदिन, कति बर्ष लागे उनी ?
काठमाडौं – विश्व चर्चित खेलाडी तथा पोर्चुगलका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोको आज फेब्रुअरी ५ को दिन जन्मदिन परेको छ । उनले आज आफ्नो ३५औं जन्मदिन मनाउँदैछन् । उनी पोर्चुगलको फुन्चलस्थित डा। नेलियो मेन्डोन्का अस्पतालमा जन्मिएका हुन् ।
उनी सामाजिक सञ्जालमा बढी खोजीनेमा पहिलो नम्बरमा पनि पर्छन् । उनका अन्य खेलाडी भन्दा बढी फलोअर्स छन् । उनी पाँच पटकसम्म च्याम्पियन्स लिग जित्ने खेलाडी पनि हुन् ।
अन्तरराष्ट्रिय भलिबल महासङघ (एफआइभीबी)ले सार्वजनिक गरेको विश्व वरियतामा नेपालले ८७औँ स्थान हासिल गरेको छ । विश्व भलिबलको सर्वोच्च निकाय एफआइभीबीले आज सार्वजनिक गरेको बरियतामा नेपालको राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीले ८७औँ स्थान हासिल गरेको हो । एफआइभीबीले अन्तरराष्ट्रिय सहभागिता र सफलताका आधारमा विश्व वरियता निर्धारण गर्दै आएको छ । वरियता क्रममा नेपालको ५७ अङ्क रहेको छ ।
त्यसैगरी वरियता क्रममा भारत ९७ अंकसहित ५४औँ स्थानमा छ । विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा भने चीन छ । ३९१ अङ्क जोड्दै चीन शीर्ष स्थानमा रहेको हो । ३८२ अङ्क रहेको अमेरिका दोस्रो तथा ३२८ अङक रहेको ब्राजिल तेस्रो स्थानमा छ । यस्तै इटाली चौथो, टर्की पाँचौँ, सर्विया छैटौँ जापान सातौँ, रसिया आठौँ, डोमिनिक गणतन्त्र नवौँ र दक्षिण कोरिया दशौँ स्थानमा छन् ।